Tsy avelan'i Google hampiasa fork Android | ny mpanamboatra televiziona amin'ny Android TV Androidsis
Ny tsenan'ny fahitalavitra dia mitovy amin'ny zavatra hitantsika amin'ny smartwatches. Manazava aho. Raha miresaka momba ny rafitra miasa amin'ny smartwatches isika dia manana Wear OS, Tizen ary watchOS amin'ny ankapobeny. Raha miresaka fahitalavitra isika dia manana Tizen, WebOS, Android TV, tvOS tsy manadino ny fork Android izay ampiasain'i Amazon ao anaty boaty misy azy.
Rehefa mampiasa Android an'ny Google ny orinasa dia tsy maintsy mahafeno andiana fepetra toy ny Aza mandefa fork Android amin'ny fitaovanao. Amin'ny fandikana ity lalàna ity dia mety hampidi-doza ny mpamokatra ny fidirana amin'ny rindranasa Google, ao anatin'izany ny Play Store.
Io takiana io dia mihoatra noho izay aza milalao amin'ny google, indrindra eo amin'ireo mpanamboatra tsy manana rafitra fiasa manokana. Ny fahaverezan'ny fidirana amin'ny Play Store dia mety ho aretin'andoha ho an'ny orinasa, satria hitantsika miaraka amin'i Huawei, izay hihena 20% ny varotra mandritra ity taona ity raha ampitahaina tamin'ny taona teo aloha.
Nefa toa manana tanana vy ihany koa i Google amin'ireo mpanamboatra fahitalavitra. Raha ny filazan'ny mpiasa iray amin'ny mpanamboatra televiziona lehibe tantanan'ny Android, raha mampiasa fork hafa izy ireo fa tsy ilay kinova natolotr'i Google azy ireo, tsy hahazo miditra amin'ny Play Store intsony izy ireo, ary noho izany, mankany amin'ny suite an'ny Google fampiharana.
Rehefa nanao fifanarahana tamin'i Google hanome alalana Android ny mpanamboatra, dia io fifanarahana io ahitana ny smartphone sy ny fahitalavitra, fanoloran-tena manery azy ireo tsy hampiasa fork Android na oviana na oviana, satria tsy hanana fidirana amin'ny serivisy Google ho an'ny vokariny rehetra, na finday smartphone na fahitalavitra.
LG sy Samsung dia mampiasa rafitra fiasa izay tsy mifototra amin'ny Android (WebOS sy Tizen tsirairay avy). Sony sy Xiaomi dia sasany amin'ireo mpanamboatra izay mivarotra finday avo lenta sy fahitalavitraIreo mpanamboatra izay mety ho voakasik'ity fifanarahana ity izay tsy azonao vonoina amin'ny fotoana rehetra raha te hanohy hitandrina ny Play Store ianao.
Ity fifanarahana ity, voatery, dia nesorina tamin'ny tsena ny fork izay ho hitantsika ao amin'ireo boaty napetraka ao Amazon, toy ny Fire TV, eny an-tsena, dia mitaky antony betsaka kokoa noho izany mba hahitan'ny tompon'andraikitra mifehy ny fifaninanana antony lehibe hanadihadiana ary hanasaziana an'i Google avy eo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Tsy avelan'i Google hampiasa fork Android ny mpanamboatra TV Android
Navoaka tamin'ny volana aprily ny famotsorana Meizu 17